Andriamanitra Ray | Fiangonan'Andriamanitra an'izao tontolo izao Suisse - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Suisse
Fiteny hafa- Alemanina- frantsay- Italiana- Anglisy- Espaniola- Portiogey- Holandey- Luxembourgish- Danoa- Norveziana- soedoà- Finnish- Poloney- Bulgarian- Rosiana- Latina- ------------ Afrikaans- Albaney- Amharic- Arabo- Armeniana- Azerbaijani- Basque- Bengali- belarosiana- Burmese- Bosnianina- Cebuano- Chichewa- Sinoa- Estonianina- Galisiana- Zeorziana- Grika- Haitian- Hawaiian- hebreo- Hindi- Indoneziana- Irlandey- Islandy- Japoney- Java- Kazakh- Catalan- Khmer- Kyrgyz- Koreana- Corsican- Kroaty- Kiorda- Lao- Latvian- Lithuanian- Malagasy- Malayalam- Maleziana- Maltese- Maori- Marathi- Masedoniana- Mongoliana- Nepaley- Pashtun- Persian- Filipiana- Punjabi- Romanianina- Samoa- Scottish- Serba- Sesotho- Sindhi- Sinhala- Slovak- Slovenian- Somali- Sodaney- Swahili- Tajik- Tamil- Telugu- Thai- Czech- Tiorka- Okrainiana- Hongroà- Urdu- Uzbek- Vietnamese- Welsh- Yoruba- Zulu
Andriamanitra, ilay Ray, no olona voalohany ao amin'ny Andriamanitra, ilay olona tsy nisy fiaviany, nateraka ny Zanaka hatrizay hatrizay ary avy amin'ny Zanaka no nitondran'ny Fanahy Masina mandrakizay. Ny Ray, izay nahary ny zava-drehetra hita sy tsy hita tamin'ny Zanaka, dia mandefa ny Zanaka mba hahazoantsika famonjena ary manome ny Fanahy Masina ho fanavaozana sy fanekena ho zanak'Andriamanitra. (Jaona 1,1.14, 18; Romana 15,6; Kolosiana 1,15-16; Jaona 3,16; 14,26; 15,26; Romana 8,14-17; Asa. 17,28)
Ho antsika kristianina, ny finoana lehibe indrindra indrindra dia hoe misy Andriamanitra. Nosoratan'i "Andriamanitra" - tsy misy lahatsoratra, tsy misy fanampiny fanampiny - midika hoe Andriamanitry ny Baiboly isika: fanahy tsara sy mahery izay nahary ny zava-drehetra, izay akaiky antsika, izay akaiky antsika, manao izay ao sy miaina. mihetsika ary manolotra antsika mandrakizay amin'ny hatsarany.
Amin'ny olombelona iray manontolo, tsy takatry ny sain'olombelona Andriamanitra. Saingy afaka manomboka isika: Afaka manangona ireo banga ny fahalalana an'Andriamanitra isika mba hahafahantsika mamantatra ny hevi-dehibe ao amin'ny sariny ary manome antsika fahatsapana tsara voalohany momba ny hoe Andriamanitra sy izay ataony eo amin'ny fiainantsika. Andeha isika hifantoka amin'ireo toetran'Andriamanitra, izay mety hino manokana ny mpino vaovao.
Betsaka ny olona - na mpino efa ela aza - maniry porofo ny fisian'Andriamanitra. Tsy misy porofo izay manome fahafaham-po ny rehetra ny rehetra. Tsara kokoa raha miresaka porofo na fanoratana fa tsy porofo. Ny porofo dia manome toky antsika fa misy Andriamanitra ary ny toetrany dia mifanaraka amin'ny lazain'ny Baiboly momba azy. "Andriamanitra dia tsy namela ny tenany ho tsy hita", hoy i Paoly tamin'ny hafa firenena tany Lystra (Asan’ny Apostoly 14,17). Ny fijoroana ho vavolombelona - inona izany?
zavaboary Ny Salamo 19,1: 1,20 dia milaza hoe: "Ny lanitra milaza ny voninahitr'Andriamanitra ..." ao amin'ny Romana dia milaza hoe:
Satria Andriamanitra tsy hita maso, izany no heriny mandrakizay sy ny maha-Andriamanitra azy, dia hita avy amin'ny asany hatramin'ny namoronana izao tontolo izao ... »Ny fahariana dia milaza zavatra momba an'Andriamanitra.
Ny antony dia manolo-kevitra fa nisy zavatra nahatonga ny Tany, ny masoandro ary ny kintana tamin'ny tanjona. Araka ny siansa, ny "cosmos" dia nanomboka tamin'ny orona lehibe; Antony antony hinoany fa nisy zavatra nahatonga ilay bang. Izany zavatra izany - inoantsika - Andriamanitra.
Plan Ny famoronana dia mampiseho famantarana ny filaminana, amin'ny lalàna momba ny vatana. Raha toa ka tsy dia misy firy ny zavatra fototra iainana, raha tsy misy ny tany, dia tsy misy olona. Raha samy manana ny habeny na ny orbit hafa ny tany, ny toe-piainana eto an-tany dia tsy mamela ny ain'ny olona. Ny sasany dia mihevitra an'io ho kisendrasendra fotsiny; ny hafa kosa dia mihevitra kokoa fa hazavaina hoe ny rafi-masoandro dia novolavolain'ny mpamorona marani-tsaina.
Leben dia miankina amin'ny fitaovana sy fihetseham-po simika mivaingana be pitsiny. Ny sasany dia mihevitra ny fiainana ho "tonga saina"; Ny hafa dia mihevitra azy io ho kisendrasendra. Misy ny mino fa hanaporofo ny fiandohan'ny fiainana "tsy misy Andriamanitra" ny siansa. Ho an'ny olona maro anefa, ny fisian'ny fiainana dia porofon'ny andriamanitra mpamorona.
olona manana fandinihan-tena. Mandinika an'izao rehetra izao izy, mieritreritra momba ny dikan'ny fiainana, amin'ny ankapobeny dia afaka mitady dikany. Ny hanoanana ara-batana dia manondro ny fisian'ny sakafo; Nangetaheta ny zavatra iray fa misy zavatra ahafahana mamono io hetaheta io. Ny faniriantsika ara-panahy ve dia midika fa misy ny dikany ary mety ho hita? Betsaka ny olona milaza fa nahita ny hevitry ny fifandraisany amin'Andriamanitra.
Fitondran-tena [etika] Mety sy diso ve izany sa resaka hevitra fotsiny sa fanontanian'ny hevitry ny maro an'isa, sa misy manam-pahefana ambonin'olombelona izay mihevitra ny tsara sy ratsy? Raha tsy misy Andriamanitra dia tsy manana antony hiantsoana zavatra ratsy ny olombelona, ​​tsy misy antony hanamelohana ny fanavakavaham-pirazanana, ny fandripahan'olona, ​​ny fampijaliana ary ny habibiana mitovy amin'izany. Ny fisian'ny faharatsiana noho izany dia manondro fa misy Andriamanitra. Raha tsy misy izany dia tsy maintsy manjaka ny fahefana madio. Ny antony dia milaza ny finoana an'Andriamanitra.
Inona no toetran'Andriamanitra? Ny lehibe noho ny azontsika an-tsaina! Raha namorona an'izao rehetra izao izy, dia lehibe noho izao rehetra izao izy - ary tsy voafetran'ny fetran'ny fotoana, ny habaka ary ny angovo, satria efa nisy talohan'ny fotoana, habaka, olana ary angovo nisy.
Miresaka momba izay nataon’Andriamanitra “mialoha ny fotoana” ny 2 Timoty 1,9. Nanomboka ny fotoana ary efa nisy Andriamanitra. Izy io dia tsy misy fotoana maharitra izay tsy azo refesina an-taonany maro. Mandrakizay, tsy manam-pahataperana - ary ny tsy fahatomombanana ary ny miliara maro be dia mbola tsy fahatomombanana. Mahatratra ny fetrany ny matematika misy antsika raha te hilaza ny fisian'Andriamanitra izy ireo.
Koa satria noforonin'Andriamanitra ny zavatra dia efa talohan'ny zavatra izy ary tsy vatan'ny tenany manokana. Fanahy - fa tsy "namboarina" ara-panahy. Tsy atao akory Andriamanitra; Tsotra izy io ary misy ny fanahy. Izy no mamaritra ny maha izy, mamaritra ny fanahy izy ary mamaritra ny raharaha.
Mihoatra noho ny resaka ny fisian'Andriamanitra ary tsy mihatra aminy ny refy sy ny fananana. Tsy azo refesina amin'ny kilaometatra sy kilaometatra izy io. Niaiky i Solomona fa na ny lanitra ambony indrindra aza dia tsy mino an'Andriamanitra (1 Mpanjaka 8,27). Mameno ny lanitra sy ny tany izany (Jeremia 23,24); na aiza na aiza dia tsy hita hatraiza hatraiza. Tsy misy toerana ao amin'ny cosmos izay tsy misy azy.
Mahery ve Andriamanitra? Raha afaka mitarika be loatra izy, dia mamolavola rafitra solar izay afaka mamorona kaody ADN, raha "mahay" amin'ireo sehatra rehetra ireo izy, dia tsy tokony hisy fetra ny herisetra, fa tsy maintsy mahery indrindra izy. "Satria tsy misy tsy azo atao ny tsy Andriamanitra" hoy ny Lioka 1,37. Afaka manao izay sitrapony Andriamanitra.
Ny famoronan'Andriamanitra dia mampiseho faharanitan-tsaina izay tsy takatry ny saintsika. Izy no mifehy an'izao rehetra izao ary miantoka hatrany ny fisiany hatrany isa-tsegondra (Hebreo 1,3). Izany hoe tsy maintsy mahalala izay hitranga eto amin'izao rehetra izao; tsy manam-petra ny faharanitan-tsainy - tsy manam-paharoa izy. Ny zavatra rehetra tiany ho fantatra, hamantatra, fanandramana, fahalalana, hahafantarany, niainany.
Koa satria Andriamanitra no mamaritra ny tsara sy ny diso, dia mamaritra ny marina izy ary manana ny fahefana hanao ny tsara foana. «Satria tsy azom-panahy alaim-panahy Andriamanitra» (Jakoba 1,13). Ao amin'ny vokatra ambony indrindra sy marina daholo izany (Salamo 11,7). Mahitsy ny fitsipiny, marina ny fanapahan-keviny, ary mitsara an'izao tontolo izao koa izy satria tsara sy mahitsy izy.
Amin'izany rehetra izany, tsy mitovy amintsika Andriamanitra raha tsy misy teny manokana izay ampiasantsika mifandray amin'Andriamanitra. Andriamanitra irery ihany no mahay, tsy manam-paharoa, tsy manam-petra ary maharitra mandrakizay. Raharaha isika; fanahy izy. Isika dia maty; tsy mety maty izy. Antsoinay fa Andriamanitra sy Andriamanitra io fahasamihafana io sy ny tsy fahaizany. Izy dia "mandrindra" antsika, izany hoe lasa lavitra antsika Izy, tsy toa antsika.
Ny kolontsaina taloha hafa dia nino andriamanitra sy andriamanibavy nifanandrina, izay nanao tena, tsy nahazo nitokisana. Ny Baiboly kosa, manambara Andriamanitra manana fifehezana feno, izay tsy mila na iza na iza na iza, ary noho izany dia tsy maintsy manampy ny hafa fotsiny izy. Mafy tanteraka izy, marina sy mendri-pitokisana ny fitondran-tenany. Toy izany ny dikan'ny Baiboly rehefa miantso an'Andriamanitra hoe "masina": tonga lafatra ara-moraly.
Manamora ny fiainana izany. Tsy mila miezaka intsony ianao hampifaliana andriamanitra folo na roa hafa; iray ihany. Ilay mpamorona ny zava-drehetra dia izy ihany no mpitondra ny zavatra rehetra ary izy no hitsara ny olona rehetra. Ny fiainantsika, ny ankehitriny sy ny ho avy dia voafaritry ny Andriamanitra tokana, ny Hendry, ny Mahery, ny Mandrakizay.
Raha mba nahalala an'Andriamanitra isika fa manana hery tsy manam-petra antsika, dia mety hankatoa azy isika noho ny tahotra, miaraka amin'ny lohalika miondrika sy fo manohitra. Nefa Andriamanitra dia nanambara lafiny iray hafa amin'ny toetrany amintsika: Andriamanitra tsy andriamanitra lehibe iray tena be famindram-po ary tsara koa.
Nanontany an'i Jesosy ny mpianatra iray: "Tompoko, asehoy anay ny Ray ..." (Jaona 14,8). Tiany ho fantatra hoe manao ahoana ny Andriamanitra. Fantany ny tantaran'ilay roimemy nirehitra, ny andri-afo sy ny rahona tao Sinay, ny seza fiandrianana tsy hita izay hitan'i Ezekiela, ny mpitsikilo izay ren'i Elia (Eksodosy 2: 3,4; 13,21:1; 19,12 Mpanjaka 1; Ezekiela). Andriamanitra dia afaka miseho amin'ireto fanambaràna rehetra ireto, fa izay tena toetrany? Ahoana no ahafahantsika mamantatra azy?
"Izay mahita ahy dia mahita ny Ray", hoy i Jesosy (Jaona 14,9). Raha te hahafantatra ny toetran'Andriamanitra isika dia tsy maintsy mijery an'i Jesosy. Afaka mahazo fahalalana an'Andriamanitra amin'ny natiora isika; fahalalana bebe kokoa momba an Andriamanitra amin'ny fomba anehoany ny tenany ao amin'ny Testamenta Taloha; fa ny ankamaroan'ny fahalalana an'Andriamanitra dia avy amin'ny fomba nanehoany ny tenany tao amin'i Jesosy.
Jesosy dia mampiseho amintsika ny lafiny lehibe indrindra amin'ny toetran'ny Andriamanitra. Izy no Immanuel, izay midika hoe "Andriamanitra miaraka amintsika" (Matio 1,23). Niaina tsy nanota Izy, tsy tia tena. Ny fangoraham-po no tonga eo aminy. Mahatsapa fitiavana sy fifaliana, hadisoana ary hatezerana izy. Miahy an'ilay olona tsirairay izy. Miantso rariny Izy ary mamela heloka. Nanompo ny hafa izy, anisan'izany ny fijaliana sy ny fahafatesana.
Andriamanitra izany. Izy dia efa nanonona ny tenany tamin'i Mosesy toy izao manaraka izao: "Tompo, Tompo, Andriamanitra, mamindra fo sy mamindra fo ary manam-paharetana ary be fahasoavana sy fahatokiana lehibe, izay mitahiry fahasoavana an'arivony sy mamela heloka, fandikan-dalàna ary ota, fa tsy mamela olona tsy ho voasazy ..." (Eksodosy 2, 34-6).
Ilay Andriamanitra mijoro eo amboninny famoronana koa dia manana ny fahalalahana hiasa ao anatin'ny famoronana. Ity ny tsy fahaizany, ny maha-miaraka antsika. Na dia lehibe noho ny an'izao rehetra izao aza izy ary eo amin'ny toerana rehetra eo amin'izao rehetra izao, dia "miaraka amintsika" amin'ny fomba iray izy "miaraka" tsy mpino. Ilay Andriamanitra mahery dia akaiky antsika foana. Akaikatra ary tsy misy atiny amin'ny fotoana mitovy (Jeremia 23,23).
Tamin'ny alàlan'i Jesosy dia niditra ny tantaran'ny olombelona, ​​ny habaka ary ny fotoana. Ara-nofo izy, nasehony antsika ny maha-fiainana ao amin'ny nofo amin'ny toe-tsaina, ary asehony antsika fa tian'i Andriamanitra hampiakatra ny fiainantsika mihoatra ny nofo isika. Ny fiainana mandrakizay dia atolotra antsika, fiainana mihoatra ny fetra ara-batana izay fantatsika ankehitriny. Ny fiainana ara-panahy atolotra antsika: ny Fanahin'Andriamanitra tonga ao amintsika, mitoetra ao anatintsika ary mahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra (Romana 8,11:1; 3,2 Jaona). Miaraka amintsika foana Andriamanitra, miasa amin'ny habaka sy ny fotoana hanampy antsika.
Andriamanitra lehibe sy mahery koa ilay Andriamanitra be fitiavana sy miantra; Ilay mpitsara marina tsara indrindra dia miaraka amin'ilay Mpamonjy be famindram-po sy manam-paharetana. Ilay Andriamanitra tezitra amin'ny ota koa dia mamonjy amin'ny ota. Lehibe amin'ny fahasoavana Izy, lehibe amin'ny hatsaram-panahy. Tsy mitovy amin'ny olona iray izay afaka mamorona kaody ADN, ny lokon'ny avana, ny lafin'ny voninkazo dandelion. Raha tsy tsara fanahy sy be fitiavana Andriamanitra, dia tsy hisy mihitsy isika.
Andriamanitra dia mamaritra ny fifandraisany amintsika amin'ny sary isan-karazany amin'ny fiteny. Ohatra, ny rainy dia zanany isika; izy ny vady ary isika, tahaka ny vondron'olona mivady; izy no mpanjaka sy isika vahoakany; Izy no mpiandry ary isika ondry. Ny itovizan'ireny sarin-teny momba ny fiteny ireny dia manolotra ny tenany amin'ny maha-tompon'andraikitra azy izay miaro ny olony sy manome fahafaham-po ny filany Andriamanitra.
Fantatr'Andriamanitra ny maha-bitika antsika. Fantany fa mety handroaka antsika amin'ny rantsantanana izy, miaraka amin'ny herin'ny hery kosmika. Ao amin'i Jesôsy anefa dia asehontsika Andriamanitra fa tena tia antsika izy ary tena miahy antsika. Nanetry tena i Jesosy aza ka nijaly na dia nanampy antsika aza. Fantany ny fanaintainana lalovantsika satria izy irery no nijaly. Fantany ny fangirifiriana ateraky ny faharatsiana ary tonga ao aminy, mampiseho amintsika fa afaka matoky an'Andriamanitra isika.
Mikasa Andriamanitra ho antsika satria namorona antsika araka ny endriny Izy (Genesisy 1:1,27). Nangataka antsika izy hampifanaraka azy - amin'ny hatsaram-panahy, fa tsy amin'ny fahefana. Ao amin'i Jesosy Andriamanitra dia manome ohatra iray izay azontsika atao sy tokony alain-tahaka: ohatra amin'ny fanetren-tena, fanompoana tsy misy fitiavan-tena, fitiavana sy fangoraham-po, finoana ary fanantenana.
"Andriamanitra dia fitiavana" hoy i Johannes nanoratra (1 Jaona 4,8). Nasehony ny fitiavany antsika tamin'ny nandefasany an'i Jesosy ho faty noho ny fahotantsika, mba hianjera ny sakantsakana eo amintsika sy Andriamanitra ary afaka miaina miaraka aminy amin'ny fifaliana mandrakizay isika. Ny fitiavan'Andriamnitra dia tsy eritreretin'ny eritreritra - fihetsika izay manampy antsika amin'ny zavatra tena ilaintsika indrindra.
Mianatra bebe kokoa momba an'Andriamanitra isika amin'ny fanomboana an'i Jesosy noho ny nitsanganany tamin'ny maty. Nasehon’i Jesosy antsika fa vonona ny hijaly Andriamanitra, eny fa na dia ny fanaintainan’ny olona ampiany aza. Ny fitiavana dia miantso, mampirisika. Tsy manery antsika hanao ny sitrapony izy.
Ny fitiavan'Andriamanitra antsika, izay aseho mazava tsara ao amin'i Jesosy Kristy, no ohatra ho antsika: «Izao no fitiavana: tsy ny nitiavantsika an'Andriamanitra, fa ny nitiavany antsika ary nandefa ny Zanany ho fampihavanana noho ny fahotantsika. Ry malala, raha nitia antsika Andriamanitra dia tokony hifankatia koa isika » (1 Jaona 4: 10-11). Raha miaina amim-pitiavana isika, ny fiainana mandrakizay dia ho fifaliana, tsy ho antsika ihany fa ho an'ireo manodidina antsika koa.
Raha manaraka an'i Jesosy amin'ny fiainana isika dia hanaraka azy amin'ny fahafatesana ary amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Ilay Andriamanitra izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no hanangana antsika sy hanome antsika fiainana mandrakizay (Romana 8,11). Raha tsy mianatra mitia kosa isika dia tsy hankafy ny fiainana mandrakizay. Izany no antony ampianaran'Andriamanitra antsika hitia, amin'ny fotoana izay ahafahantsika mihazona azy, amin'ny alàlan'ny ohatra tonga lafatra izay ananany antsika, manova ny fontsika amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina miasa ao amintsika. Ny hery izay mifehy ny reaktera niokleary amin'ny masoandro dia miasa am-pitiavana ao am-pontsika, izay ho antsika, mandresy ny fitiavantsika, mandresy ny fahatokisantsika.
Manome antsika fiainana eo amin'ny fiainana, orientation amin'ny fiainana Andriamanitra, manantena fiainana mandrakizay. Afaka matoky azy isika, na dia mijaly amin'ny fanaovana soa aza. Ny heriny dia ao ambadiky ny hatsaram-panahin'Andriamanitra; ny fitiavany dia tarihin'ny fahendreny. Ny hery rehetra eo amin'izao rehetra izao dia mibaiko ary ampiasainy ho faran'izay tsara izahay. Fantatsika kosa anefa fa ho an'ireo tia an'Andriamanitra dia manompo tsara indrindra ny zava-drehetra ... » (Romana 8,28).
Ahoana no hamaliantsika Andriamanitra, lehibe sy tsara fanahy, mahatsiravina ary be famindram-po? Mamaly fitsaohana isika: fanajana ny voninahiny, ny fiderana ny asany, ny fanajana ny fahamasinanany, ny fanajana ny heriny, ny nenina amin'ny fahatanterahany, ny fanekena ny fahefana izay hitantsika ao amin'ny fahamarinany sy ny fahendreny.
Mamaly ny famindram-pony isika amin'ny fankasitrahana; amin'ny fahasoavany amin'ny fahamendrehana; amin'ny hatsaram-panahiny amin'ny fitiavantsika. Ankafizinay izy, ivavahanay izy, atolotsika azy amin'ny faniriana omena bebe kokoa. Tahaka ny nanehoany ny fitiavany antsika, dia avelantsika hanova antsika izy mba hitiavantsika ireo olona manodidina antsika. Mampiasa izay rehetra ananantsika isika, izay ananantsika rehetra, izay omeny antsika hanompoana ny hafa amin'ny fanarahana ny ohatra nomen'i Jesosy.
Io ilay Andriamanitra ivavahantsika, satria fantany fa maheno ny teny rehetra Izy, mahalala ny eritreritra rehetra, mahalala ny zavatra ilaintsika, Izy dia miahy ny fahatsapanay, maniry ny hiara-hiaina antsika mandrakizay Izy, ananany ny fahefana hanome antsika ny faniriana rehetra sy ny fahendrena tsy hanaovana izany. Ao amin'i Jesosy Kristy dia voaporofo fa mahatoky Andriamanitra. Andriamanitra manompo, fa tsy hoe tia tena. Ny heriny lalandava amin'ny fitiavana. Ny Andriamanitsika dia avo indrindra amin'ny fahefana sy ny avo indrindra amin'ny fitiavana. Afaka matoky azy tanteraka amin'ny zavatra rehetra isika.